Waxsoosaarka - Isbarbar dhigga wadooyinka wax soo saarka ee Warshadaha BOPET
Isbarbar dhigga wadooyinka waxsoosaarka warshadaha BOPET
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira laba dariiqooyin wax soo saar oo kala duwan oo warshadaha BOPET ah, mid ayaa ah habka goynta, mid kalena waa mid toos ah.
Kahor 2013, suuqa inta badan wuxuu ku saleysanaa habka goynta, halka wixii ka dambeeya 2013, la soo saaray hanaan socodka. Marka loo eego tirakoobka Zhuo Chuang, dhammaadka Sebtembar 2019, wadarta awoodda wax soo saarka BOPET ee Shiinaha waxay ahayd 3.17 milyan oo tan, iyo awoodda wax soo saarka ee qalabka tooska ah ee dhalaalaya ay ku dhawaad ​​30% wadarta guud ee wax soo saarka, iyo inta hartay 60 % awooda wax soo saarku waxay ahayd qalab qalajinta.
Khadka tooska dhalaalinta tooska ah
AwoodaKonton / Sannado）
Qiimaha goynta goynta ayaa ka hooseysa kan tooska ah oo dhalaalaya, qiyaastii 500 yuan halkii tan. Sidaa darteed, waxay leedahay faa iido xoog leh duurka filimka guud. Waqtigaan la joogo, seddexda shirkadood ee ugu sareysa warshadaha waxay leeyihiin afar qalab oo sharci fulin ah, Jiangsu Xingye, Yingkou Kanghui waa alaab-qeybiyeyaasha 3-aad ee ugu sarreeya warshadaha BOPET ee Shiinaha, saamiga suuqa ee filimka caadiga ahna waa dhowr. Soosaarka Ningbo Jinyuan, Fujian Baihong, Zhejiang Yongsheng iyo Shuyang Genzon ayaa ku biiraya warshadaha, qaab cusub oo tartan ah ayaa laga sameeyay beerta 'BOPET', laakiin faa'iidada guud ee tartanku waa mid ka cad cad habka goynta.
Labada geeddi-socod waxaa ku jira faa'iidooyin iyo faa'iido-darro. In kasta oo faa'iidada ay u leedahay dhalaalidda tooska ah ee filimka guud ay ka fiican tahay, qadka habka goynta wuxuu leeyahay faa'iidooyin muuqda marka loo eego habka wax soo saarka iyo hodanka badeecada. Waqtiga xaadirka ah, suuqa BOPET ee tooska wax soo saarka dhalaalaya ayaa ah qadka soosaarka filimka khafiifka ah, caadiyan badeecadaha filimka 'Thyn BOPET' waxaa badanaa loo isticmaalaa duubista guud. Kaliya qayb ka mid ah dhumucda ayaa loo isticmaali karaa garoonka elektaroonigga ah. Si kastaba ha noqotee, khadka wax soo saarka ee geeddi-socodka jarista ayaa ah khadka soosaarka filimka dhumuc weyn. Baakadaha caadiga ah ka sokow, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa warshadaha warshadaha elektiroonigga ah iyo korontada, meelaha dhismaha iyo codsiyada ayaa aad u badan, kooxaha macaamiishana way ka awood badan yihiin.
Iyada oo kor loo qaadayo khadka wax soo saarka BOPET iyo hagaajinta tikniyoolajiyada, qalabka tooska dhalaalaya ayaa soo saari kara alaabo badan oo aad u badan iyada oo la adeegsanayo hoos u dhaca qiimaha. Sannadkii 2005, iyada oo loo marayo casriyeyn farsamo, Fujian Baihong wuxuu kordhin karaa dhumucda wax soo saarka min 75μ ilaa 125μ. Qalabka cusub ayaa wali loo qorsheeyay goor dambe. Waqtigaas, waxay awoodi doontaa inay soo saarto alaabo leh dhumucda 250μ iyo 300μ. Tani waa tallaabo horumarineed oo xagga qalabka ah. Intaa waxaa dheer, khadka wax soo saarka BOPET wuxuu sidoo kale gaadhay horumar lafa-beero marka loo eego ballac ahaan: Laga soo bilaabo 3.2 mitir ilaa 8.7 mitir ilaa 10.4 mitir. Shiinaha BOPET wuxuu qayb ka yahay qorshaha dabayaaqada ee 3-15 ee qadarka wax soo saarka 10.4 m, kaas oo soo celin doona qaabkan cusub ee warshadaha BOPET ee Shiinaha.